Dhirta dhirta cawska dhexdhexaad ah | January 2020
Ugu Weyn Ee Dhirta dhirta cawska dhexdhexaad ah
Noocyada dhirta tufaaxa ah ee koox dhexe - miraha qoraxda
Waxaa laga yaabaa in aanay jirin qof aan jeclayn dhadhanka macaan ee macaan ee tufaaxa. Tufaax waa miro aad u qaali ah, sidoo kale waa mid faa'iido leh. Midhahaasi waxay ku lug leedahay sheekooyin iyo khuraafaadyo badan, oo ka bilaabanaya halyeeygii hore ee Aadan iyo Xaawo. Ma aha oo kaliya tufaax ayaa waxay noqotay miraha dabiiciga ah oo qurux badan, oo ka muuqda halyeeyada badan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhirta dhirta cawska dhexdhexaad ah 2020